चाडपर्वमा पनि महिला नै जोखिममा |
चाडपर्वमा पनि महिला नै जोखिममा
प्रकाशित मिति :2017-09-21 13:55:38
काठमाडौं । गोरखाको विकट क्षेत्र अजिरकोट गाउँपालिका २ मुच्चोककी १६ वर्षीया सुष्मा परियारको गत साता दशैका लागि जंगलमा दाउरा खोज्न जाने क्रममा लडेर गम्भिर घाइते भइन् ।
रुखबाट खसेर झण्डै ५० मिटर तल खसेकी सुष्माको टाउको र गर्धनमा नराम्ररी चोट लागेको छ । उनकी ठूली आमाका छोरा भिमसेन परियारका अनुसार सुष्माको वीर अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । डाक्टरहरुका अनुसार सुष्माको गर्धन समेत भाँचिएको छ ।
कपिलबस्तुको बाणगंगा नगरपालिका ९ भर्तापुरमा दशैँको लागि माटो खन्न जाँदा एकै घरका दुई महिला पुरिएर घाइते भए । २९ वर्षीया सुशिला रासकोटी र ५० बर्षीया लालकुमारी रासकोटी माटोको डिस्को खसेर पुरिएर घाईते भएका हुन् । लालकुमारीको खुट्टा र करङ भाँचिएको छ भने सुशिलाको मेरुदण्ड भाँचिएको छ । दुवैको हरियो खर्क अस्पताल पोखरा उपचार भइराखेको छ । सोही ठाउँमा दुई वर्ष अघि माटोको ढिस्कोले पुरिदा एक युवतीको ज्यान गएको थियो ।
यि त उदाहरण मात्रै हुन् । चाडपर्व नजिकिदैँ गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा महिलाहरु विभिन्न खालको दुर्घटनामा परिरहेका हुन्छन् । भने धेरैले ज्यान समेत गुमाएका छन् ।
चाडपर्व आएसँगै महिलाहरुको बेस्तता पनि बढेको हुन्छ । घर लिपपोत र सरसफाइ, माटो, गोबरको जोह गर्ने, घाँसदाउराको बन्दोवस्ती गर्नेदेखि घरको अधिकांश काम महिलाले गर्नुपर्ने हुन्छ । झनै पछिल्लो समय पुरुषहरु रोजगार र अध्ययनको शिलशिलामा घर बाहिर हुने भएकाले पनि चार्डपर्वको अधिकांश तयारी महिलाकै काँधमा आएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी कार्यक्रम संयोजक विजु कंणेल ग्रामिण क्षेत्रका महिलाका लागि चाडपर्व बोझ हुने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘चाडपर्वमा चुलोचौकाको काम मात्र हैन, ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुले माटो खन्ने, बोक्ने, घाँस दाउरा गर्ने जस्ता घरबाहिरका जोखिमपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले महिलाहरु धेरै दुर्घटनमा पर्ने गरेका उदाहरण छन् ।’ संयोजक कंणेलले भन्नुभयो ।
चाडपर्वमा अधिकांश पुरुषहरु तास खेल्ने, जाँडरक्सी खाएर रमाईलो गर्छन् भने महिलाहरु घरको सारा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले चाडपर्व महिलाका लागि बोझ हुने उहाँको भनाई छ ।
स्पाइनल कर्ड मेडिसिन एण्ड रिह्याबिलिटेसन विशेषज्ञ डा. राजु ढकालले चाडपर्वका बेला महिलाहरु घरधन्दासँगै घर बाहिरका काम पनि सवै गर्नुपर्ने भएकाले दुर्घटना हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको बताउनुभयो । घाँस दाउरा गर्दा, लिपपोत गर्दा होस् या माटो खान्न जादा होस् धेरै महिला चाडपर्वको बेला जोखिममा पर्ने गरेको डा. ढकाल बताउनुहुन्छ ।